DOWNLOAD FSND Boeing 727-200 nokuda FSX-SP2 - Rikoooo
Downloads 19 230
Created 06-07-2009 16: 44: 39
Akachinja 07-06-2012 00: 49: 02
Heino 100% chizvarwa FSX-SP2 FSND Boeing 727-200, ane wakakwana, hunosanduka rakapotsa Cockpit. Maitiro ari musoro ndege kwakaedzwa chaiyo vezvikepe. The gauges vave calibrated kururama kuti chaizvoizvo kushandiswa.
4 zvakakumikidzwa inlcusive: Amercian Airlines, Viasa, Northwest, Lufthansa
Wedzerai-pane zvakanaka chaizvo unhu!
Ndinokutendai kuna Alejandro Rojas Lucena nokuda azvo mvumo cheki rake panzvimbohttp://www.simviation.com/fsnd/
The Boeing 727 akanga kwenguva refu airliner munyika zvikuru nevanhu. The 727 nendege kokutanga muna 1963. Pamasikiro 727 waiva mugumisiro kubvuma pakati United Airlines, American Airlines uye Eastern Air pamusoro configuration of Boeing 707 amutsive. United Airlines aida mana-injini ndege kune dzendege munzvimbo dzakakwirira, zvikurukuru ayo nzvimbo ine pachikuva Stapleton International Airport. American Airlines aida mapatya-injini ndege kuti unyatsoshandisa zvikonzero. Air akanga achitarisira kuti injini ndege kune muCaribbean rechitatu. Pakupedzisira, vendege matatu vakabvumirana pamusoro saith, uye nokudaro kwakazvarirwa 727.
The 727 kwakabudirira guru vendege zvose zviri nokuvonga munyika kukwanisa zvayo kunyika iri mapfupi runways, paaishumira unosvikirwa akareba. Izvi zvakaita vendege kukwezva vafambi kubva mumaguta yakatsvikinyidzana vane dzendege asi duku chakatarira dzakawanda nzvimbo dzokugara.
Chimwe chinhu kuti akapa 727 kukwanisa yayo kunyika iri mapfupi runways aiva rinokosha akaitwa namapapiro ayo. By pakukoka deployment pamusoro ichibhabhamisa uye achitevera micheto, iye 727 aigona zvinenge kaviri ayo zvinobereka pose, izvo hwakamubvumira kubhururuka chete kutsiga kukuru yakaderera chaizvo aimhanya Source Wikipedia
FSND Boeing 727-200 nokuda FSX-SP2 Download
Downloads: 52 589
Downloads: 37 246
Downloads: 68 603
Downloads: 9 718
Downloads: 30 899
Downloads: 94 686
Downloads: 117 128